Rosiana lehilahy ny mahazo babo be dia be amin'ny maha-vehivavy na oviana na oviana"
Rosiana lehilahy ny mahazo babo be dia be amin’ny maha-vehivavy na oviana na oviana»
Ny iray amin’ireo fanekem-fa nahasarika ny ankamaroan’ireo valinteny dia ny tantara izay aho no nanoratra bebe kokoa noho ny dimy ambin’ny folo taona lasa izay, ny gazety rosiana ho an’ny olona (toy ny zavatra cafe). Kabary dia momba ny rosiana lehilahy iray avy tamin’ny fomba fijery toy ny (dia) negrutskii vehivavy. Izany no kely mahafinaritra, sy ny fahatsapana mahery vaika ny molotov. Ohatra, nanoratra aho fa rosiana lehilahy izay lasa lonnfeta vao nijanona tsy misotro vodka sy nanomboka nisotro labiera, izay io dia vokatry ny rava ny Firaisana Sovietika, rehefa tampoka be dia be ny Tandrefana labiera niseho ao amin’ny toeram-pivarotana. Fa nisy lehibe kolaka ao amin’ny lahatsoratra, izay rosiana ny olona mbola mihevitra fa izy ireo dia nanana ny zo hisotro eo amin’ny rehetra, mba hampihenana ny tsy mijaly fa ny fiainana mitondra. Rosiana ny olona dia tsy isalasalana fa nijaly be namakivaky ny tantara ireny, fa izany dia tsy marina hoe rosiana vehivavy efa nijaly ihany koa. Na izany aza, afa-tsy ny olona iray dia afaka manaiky ny fijaliana toy ny kely, raha ilaina, kely amboara. Rosiana ny olona hahafantatra fa izany dia ny karatra izay mandeha an-trano miaraka amin’ny maro ny rosiana ny vehivavy. Mandritra izany fotoana izany, izany fijaliana dia fialan-tsiny ho azy ireo ny handray andraikitra ho an’ny maro ny zavatra sarotra eo amin’ny fiainana. Androany aho dia angamba ny hilaza aminy fa ny tantara dia samy hafa kely, fa ny sasany ny zavatra mbola toa manan-danja. Maro loatra ny olona any Rosia mbola ilazana ny fangorahana sy ny fitiavana. Izany dia tsy inona no za-draharaha, fa izay rosiana ny vehivavy dia matetika no milaza.»Oh, izy dia mahatsiaro malahelo azy, avy eo izy ireo dia tsy ho ela dia ho tonga ny mpivady,»matetika ianao no mandre, ohatra. Ny olona dia manana ny marina izy raha mora namela. Rosiana lehilahy ny mahazo babo be dia be, tahaka ny vehivavy izay tsy mety. Tsy fantatro hoe firy ny fianakaviana, fantatro fa ao Rosia, taorian’ny vanim-potoana Sovietika ny firenena, izay namoy ny fananany na ny trano noho ny antony isan-karazany. Fa raha ny vehivavy ao amin’ny fianakaviana ny hamoritra tanan’akanjo ary raiso ny sasany skitjob ny sakafo ny fianakaviana, fa tsy mahita ny olona ao an-trano nalahelo ho an’ny tenany sy ny fisotroana. Ny vadiny dia afaka mitsara ho azy ireo sy ny resaka isan-karazany tsy misy dikany ny momba azy amin’ny namana fa izy kosa mamela heloka sy manohy ny loany, afa-tsy ny vadiny maka vola mba hividy iray, fara fahakeliny, tavoahangy zava-pisotro misy alikaola. Dia nandao azy, tsy»noho izany dia henatra ho azy ary fa raha tsy izy no hikarakara azy.»Izy tsy izy no farany ny herinandro tsy ahy.»Na izany aza, ny vehivavy no tena menatra ny zava-pisotro. Toy izany koa ny fifandraisana amin’ny ankizy. Andraikitra ho an’ny ankizy foana mandry amin’ny vehivavy. Izy dia manana ny fialam-boly, dia mandeha amin’ny namana, ary izy no miasa.
Ny fotoana no tsy mamela toerana ho an’ny fikarohana asa sy manana Babysitting asa fanompoana. Izy efa mahalala fa raha izy no lasa bevohoka, dia mety ho very ny asa, satria ny lehilahy mpampiasa dia mihevitra fa izy dia tsy ho eo amin’ny fiterahana, fa koa ao amin’ny tsiny ny nahalala fa ny vadiny dia tsy manao izany. Ao ny raharaha fisaraham-panambadiana, ny ankizy dia foana miaraka amin’ny reniny, ary amin’ny tsara indrindra ny vadiny mandoa alimony (antitra, fa mbola mahaliana ny fanadihadiana natao fa ity taona ity ihany ny isan-jaton’ny alimony dia aloa ny ray). Dada tsy maintsy mifindra any amin’ny tanàna hafa na firenena — zavatra ny ankizy mba mila dada, na inona na inona mandeha tsara lavitra noho ny. Fantatro fa maro amin’ny rosiana lehilahy izay saika tsy nandresy ny ankizy, na dia manana ny zavatra takiana alohan’ny ho an’ny izany. Nandritra ny taona maro, efa niresaka tamin’ny olona maro (ray, reny, psikology, sociologists, ny mpahay tantara sy ny mpahay lalàna) ny momba ny antony rosiana lehilahy, toy ny vehivavy, tsy mahatsapa ny tokony haka andraikitra bebe kokoa noho ny fianakaviana na ho an’ny tenany. Mino ny ankamaroan’ny olona fa ny miavaka tantaran’ny Rosia izay nahatonga ny rosiana, ny olona dia tsy manan-kery, ary ny rosiana ray dia tsy misy. Revolisiona, ny ady an-trano, roa izao tontolo izao ny ady sy ny Googlegram efa be dia be ny olona.
Ireo izay tsy maty dia mihorohoro
Ny vehivavy tsy maintsy mandray andraikitra. Efa mba hisolo ny olona, na tany an-tsaha sy ny fitaizana ny ankizy. Mandritra izany fotoana izany, taranaka iray manontolo ny lahy lehibe raha tsy misy lehilahy ny modely. Raha toa ka ara-poto-kevitra tsy manana ny ray, afa-tsy amin’ny fampiharana tsy manana ny iray, fa mafy mba ho tsara ny ray. Raha toa ka tsy miara-miasa amin’ny tenanao manokana, ary manapa-kevitra ny handrava ny fanononana. Ny fanadihadiana natao tao amin’ny rosiana Karelia dia hita fa ny momba ny sivifolo isan-jato ny raim-pianakaviana mahatsapa fa izy dia mitana toerana lehibe tsy ao ho amin’ny fampandrosoana ny ankizy, nefa koa ho salama sy sambatra ny fiainana, mandany fotoana miaraka amin’ny ankizy. Tao anatin’ny taona vitsivitsy, izany dia efa nanomboka fandefasana maro baoritra tetikasa manerana an’i Rosia. Misy gazety-boky sy tranonkala ao amin’ny Internet izay efa nanomboka niresaka momba ny andaniny sy ny ankilany — toy ny baoritra horonana. Tanàna maro ankehitriny manana papascoscolor izay ny ho avy, satria ny ray dia afaka hihaona hafa ao amin’ny toe-javatra mitovy amin’izany ny miresaka momba ny fihetseham-po sy ny olana. Tao Saint-Pétersbourg ny tolotra ara-tsosialy atao ihany koa ny manomboka ny hery tsy tompon’andraikitra ny ray mba handeha ho any Pappasole ho tsara kokoa ny hikarakara ny zanany. Ao an-tanànan’i Berezovsky akaikin’ny Yekaterinburg, vondrona lehilahy nanangona vola tamin’ny urinals ho an’ny sary sokitra maneho ny zazavavy kely miaraka amin’ny fitaovam-piadiana misokatra. Ny sary sokitra antsoina hoe»Dada, aiza ianao?»mikendry ny hanao tanàna ray mihevitra izy ireo raha toa ka tsy afaka mandany fotoana miaraka amin ny ankizy bebe kokoa matetika. Vao haingana aho no nihaona tamin’ny tanora, vao voatendry rosiana ray izay nilaza tamiko fa ny rainy dia ny rosiana olom-pirenena. tsy liana intsony ny fihazana, fa, fara fahakeliny, izany no mahaliana ny mijery ny fampandrosoana ny zanany vavy. Na dia eo aza ny zava-misy fa tsy mijery bebe kokoa tahaka ny saka kely, dia ho tonga bebe kokoa ny olombelona. Izaho te-handeha hiaraka aminy any amin’ny farany. Manantena aho fa ny fifandraisana no manao azy hoe sambatra, ary angamba izy rehefa mahazo taona, ny zanany dia hisafidy ny lehilahy iray izay izy dia mahatsiaro malahelo noho ny antony isan-karazany
← Ny sampan-draharaha Mahafantatra ny tsirairay - ny fanahy vady eto
Maimaim-Poana Ny Fiarahana Tsy Misy Fisoratana Anarana →